सबैभन्दा पीसी प्रयोगकर्ता prying आँखाबाट आफ्नो कम्प्युटरमा भण्डारण गरिएका जानकारी लुकाउन रुचाउँछु। र किन छैन? यो एकदम सामान्य छ। उदाहरणका लागि, ठूलो संगठन कुनै गुटदेखि बाहिरको व्यक्ति को कम्पनीको मात्र कर्मचारीहरु सन्दर्भमा जानकारी पाउन सक्षम थिएन कि, लगभग हरेक कम्प्युटरमा पासवर्ड छन्। आखिर, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कागजात, रिपोर्ट, र यति मा। एन भण्डारण गर्न सकिन्छ, त्यो र शोषण गर्न सक्दो प्रयास गर्छन्। र साधारण प्रयोगकर्ता बुरा छन्? वास्तवमा, सायद सबैलाई हामी फोल्डरहरूमा भण्डारण के मा धेरै रुचि छ जो एक भाइ वा बहिनी छ। हामी अहिले किनभने सिक्न हुनेछ यो छ कसरी, कम्प्युटर मा एक पासवर्ड राख्न यो prying आँखाबाट सुरक्षाको लागि। अब, लगभग सबै प्रयोगकर्ताहरू चलिरहेका छन् Windows7वा उच्च, त्यसैले हामी यसको उदाहरण मा अल्गोरिदम विचार गर्नुहोस्।
कसरी कम्प्युटरमा पासवर्ड राख्न?
यो प्रक्रिया आफ्नो समय को धेरै लिन छैन, सबै 5-10 मिनेट भन्दा कुनै थप हुनेछ। त्यसैले, तपाईं एक कम्प्युटर पासवर्ड धारण अघि, तपाईं आउन आवश्यक छ। एक सुरक्षा कोड, तपाईंको नाम, थर, जन्म मिति, वा सजिलो अंक कुनै पनि संयोजन (111111, 222222, आदि ...) रूपमा प्रयोग भएको छ - धेरै गम्भीर गल्ती स्वीकार।
र यो गलत छ: यो पासवर्ड त्यो या त्यो तिमी संग बसोबास विशेष गरी भने, "आक्रमणकारीले" अनुमान गर्न सजिलो छ र तपाईंले धेरै थाह छ। आदर्श कोड अक्षर र नम्बर एक संयोजन हुनेछ - त्यो declassify गर्न गाह्रो छ। तपाईं को लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प निम्न हुनेछ: कुनै पनि पुस्तक खोल्न र पहिलो आफ्नो आँखा मा हुन्छ कि शब्द सम्झना। अब यसलाई आज मिति थप्न - पासवर्ड तयार छ! तपाईं यस्तो राम्रो स्मृति छैन भने, तपाईँले यसलाई कागज को टुक्रा मा लेख्न र यसलाई गोप्य ठाउँमा लुकाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसैले अब कम्प्युटर मा एक पासवर्ड राख्न कसरी गर्ने लागौं।
1 चयन देखिन्छ कि सञ्झ्यालमा सही मा, "सुरुवात" मेनुमा जानुहोस्, "कन्ट्रोल प्यानल।"
2. हामी स्ट्रिङ खोजिरहेको "प्रयोगकर्ता खाताहरू" र यो क्लिक गर्नुहोस्, "आफ्नो खाताको लागि पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस्" पङ्क्ति मा क्लिक गर्नुहोस्।
3. अब तपाईं को सामने प्रस्तुत पहिले दुवै पक्षबाट गढा कोड, प्रविष्ट गर्नुहोस्। तेस्रो फारम, सुझावको स्कोर यो तपाईं स्पष्ट थियो भनेर बस यसलाई निर्दिष्ट छ।
4 सबै क्षेत्रहरू अब भरिएका छन् "पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्। कि यो हो - आफ्नो कम्प्युटर prying आँखाबाट सुरक्षित छ।
तपाईंको खाता बाहिर वा -: एक पासवर्ड सेट गर्न वा छैन जाँच गर्न, निम्न के तपाईंको कम्प्युटर पुनः सुरु गर्नुहोस्। बस अब डेस्कटपमा प्राप्त काम निगरानी स्क्रिनमा "पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्" प्रदर्शन गर्नेछ गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो एक तस्वीर छ।
कसरी कम्प्युटर बाट पासवर्ड हटाउन?
यो बेला कोड सिर्जना जस्तै तरिकामा गरेको छ। "सुरुवात" त्यसपछि जानुहोस् "कन्ट्रोल प्यानल।" लाइन पाउन "प्रयोगकर्ता खाताहरू" र दुई पटक यसमा क्लिक गर्नुहोस्। खोल्दछ विन्डो मा, वस्तु जानुहोस् "मेरो पासवर्ड हटाउनुहोस्।" त्यहाँ कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र मेटाउने पुष्टि गर्न आवश्यक हुनेछ।
त्यो केही सरल कदम संग, तपाईं अब कम्प्युटरमा पासवर्ड राख्न र यसलाई हटाउन चाहनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ, सही। मलाई आशा छ यो लेख तपाईंलाई उपयोगी थियो!
Iphone कम्प्युटरमा जडान कसरी: शुरुआती लागि निर्देशन
"को सोभियत संघ को लोगो" - खेल नियम
सपनामा आफैलाई हेर्नुहोस्। यो कस्तो अर्थ राख्छ
औषधि "Apilak": समीक्षा, आवेदन र परिणाम विधिहरू
यूएसएसआर र रूसको जनसंख्या - जसको जीवन अझ राम्रो छ?
म्यकोप्लास्मा genitalium: यो के हो? कसरी खतरनाक संक्रमण?
"Veranda" (रेस्टुरेन्ट, इभ्यानोभो): भान्सा, भित्री र सेवा